जातीय अपराधमा के म्यान्मारको सेना सजायको भागिदार हुनेछ ? - Dalit Online - Dalit Online
जातीय अपराधमा के म्यान्मारको सेना सजायको भागिदार हुनेछ ?
१३ भाद्र २०७५, बुधबार २१:४६
बैंकक- संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिले म्यान्मारको सैनिक नेतृत्वलाई रोहिङग्या जातीविरुद्ध भएको भनिएको अपराधमा न्यायालयको सामना गर्नुपर्ने बताएको छ । यहाँको सेना कारबाहीको भोगी होला भन्ने बिषय लामो र जटील छ । आफ्नो सहयोगीविरुद्ध ल्याइने कुनै पनि कारबाहीको मागलाई अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लान चीनले अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ ।
राष्ट्रसंघीय तथ्य–अन्वेषण टोलीले सोमबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा म्यान्मारका सैनिक प्रमुख मिन अङ लाइङसहित अन्य सदस्यले जातीय नरसंहारमा सम्लग्न भएको भन्दै उनीहरू सजायको भागीदार हुनुपर्ने दावी गरिएकोे छ । उनीहरूविरुद्ध दर्जनौँ रोहिङग्या मुसलमानको हत्या गरेको र करिब सात लाख नागरिकलाई विस्तापित हुन बाध्य पारेको आरोप छ । विस्थापित अधिकांश शरणार्थीको रूपमा बङ्गलादेश लागयतका एशियाली मुलुकमा बस्न बाध्य छन् ।
रोहिङग्याका लागि छिटो र न्यायपूर्ण बाटो
द हेगस्थित अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी) शुरुवातको प्रक्रिया हुनसक्छ । यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद््ले म्यानमारलाई उक्त अदालतसमक्ष पठाउनुपर्छ ।
तर भूराजनीतिले उक्त मुद्दालाई चीन र रूसलाई जोड्ने अवस्था रहन्छ । सैनिक जनरल लाइङलाई केही दिन पहिले आतिथ्यता दिएको मुलुकले राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद््मा विशेष शक्तिको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
चीनले निरन्तर रोहिङग्या समस्या म्यान्मारको आन्तरिक समस्या भएको भन्दै राष्ट्रसङ्घमा हुने आलोचनालाई पन्छ्याउने गरेको छ ।
रखाइन राज्यको धेरै जटील ऐतिहासिक, जातीय तथा धार्मिक पृष्ठभूमि रहेको चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुनयिङले मङ्गलबार सञ्चारकर्मीसँगको नियमित भेटघाटमा बताउनुभएको छ ।
त्यसो भए समस्याको समाधान वार्ता तथा सम्झौता कसरी निकाल्ने भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, मलाई लाग्छ कसैमाथि दोष अथवा दवावले कुनै पनि कुराको समाधान निकाल्दैन । न्यूयोर्कस्थित सुरक्षा परिषद््मा म्यानमारबारे अगस्ट २८ मा छलफल भएको छ ।
यदि आइसीसीको कानूनी कदमबारे सुरक्षा परिषदमा छलफल जारी छ भने यसलाई रुवाण्डा, युगोस्लाभिया, लेबनान र कम्बोडियाका लागि गरेजस्तै अनौपचारिक वा मिश्रित न्यायाधिकरणमार्फत अघि बढाउन सकिन्छ ।
तर यो पद्धति विगतमा विवादास्पद बनेको थियो । सन् २०१७ को डिसेम्बरमा युद्ध अपराधसम्बन्धी न्यायाधीशले द हेगको पक्राउपूर्जीको आदेशअनुसार सुडानी नेता ओमार अल–बासिरलाई पक्राउ गरी द हेगमा नबुझाएका कारण जोर्डनको आलोचना भएको थियो ।
तर समितिले सुकीलाई रोहिङग्या हिंसा समाधानका लागि आफ्नो नैतिक अधिकारको प्रयोग नगरेकोमा छानविनको दायरामा ल्याउनसक्छ ।
छानविनले सुकीको प्रशासनले कुनै गलतकार्य नभएको भनी घटनालाई लुकाउन खोजेको, राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानमा अवरोध पु-याएको र रोहिङग्याबारे गलत विवरण फैलाएको भनी आरोप लगाएको छ ।
अगस्टमा सरकारले अनुसन्धानलाई ‘आधारहीन’ भनी यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएको थियो । म्यानमार सरकारले रोहिङग््याबारे अनुसन्धानका लागि आफ्नै स्वतन्त्र आयोग गठनगरेको जनाएको छ ।
घरविहीन रोहिङग्या शरणार्थीमाथि म्यान्मारभित्र निकै कम सहानुभूति राखिने गर्छ र यसकै कारण म्यानमारका सैनिक प्रमुख मिन अङ लाइङले रोहिङग््या इतर स्थानीय बहुसङ्ख्यक सर्बसाधारणबाट समर्थन लिन सफल छन् । केहीले त रोहिङग््या विरुद्धको कारबाही विद्रोही लडाकूसँगको राज्यको प्रतिकारका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छन् ।
प्रकाशित | १३ भाद्र २०७५, बुधबार २१:४६
छ दलित नेताहरूको नजरमा : विजेश्वरी दलित विकास छात्रावास